နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေ - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
တစ်ဦးကနိုင်ဂျီးရီးယားမူပိုင်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်တီထွင်မှုကျော်ခွင့်ပြုသည့်သီးသန့်ဥပဒေရေးရာမှန်သည်. မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စီးပွားရေးအရအဆိုပါ protected တီထွင်မှုအမြတ်ထုတ်ရာမှအခြားသူများအားရပ်တန့်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သောသုံးပြီးအဖြစ်, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်တင်သွင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချနေ. မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုမြင့်မားအရောင်းနှင့်ပိုမိုအမြတ်အစွန်းကိုမောင်းကူညီပေးခဲ့.
Lex Artifex LLP, တစ်ဦး နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကမ်းလှမ်း. The Lex Artifex Law Firm is an accredited patent lawyer in Nigeria, နှင့်အချိန်မီနှင့်အတူ clients များထောက်ပံ့ပေး, cost-effective and excellent IP services.
အဆိုပါကုမ္ပဏီနိုင်ဂျီးရီးယား Intellectual Property ရုံးကလိုင်စင်ဖြစ်ပါသည် (တနည်း. အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်, အမှတ်တံဆိပ်, နှင့်စက်မှုစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပညာဌာန၏ Registry ကို Designs, နိုင်ဂျီးရီးယား၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
Lex Artifex LLP ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စီးပွားဖြစ်နှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ၏ဘက်တော်သားအထူး. နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်၎င်း၏မူပိုင်ရှေ့နေပြင်ဆင်နှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားမူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့မှာမူပိုင်ခွင့်များအတွက် applications များတရားနှင့်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများအပေါ်ဥပဒေရေးရာထင်မြင်ယူဆပေး, ချိုးဖောက်မှုနှင့်တရားဝင်မှုကိစ္စများ.
ကုမ္ပဏီအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ clients များကိုယ်စားပြု နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်ပုံစံတင်ပို့ရန်, အိုင်ပီအစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်လိုင်စင်အစီအမံများရေးဆွဲ.
နိုင်ဂျီးရီးယားမူပိုင်ခွင့်ရုံးမှာမူပိုင် APPLICATION သို့တစ်ခုကိုဖြည့်လိုအပ်ချက်များ
အောက်တွင်အနည်းငယ်အခြေခံများမှာ နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်အတွက်လိုအပ်ချက်များကို (ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသားအဆင့်).
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ: ရှေ့နေတစ်ဦးတစ်ပါတည်းကွပ်မျက်ပါဝါ (scan ဖတ်မိတ္တူ). ရှေ့နေများ၏ပါဝါလျှောက်ထားသူကုမ္ပဏီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်အားဖြင့်ကွပ်မျက်ခံရသို့မဟုတ်လျှောက်ထားသူတစ်ဦးချင်းစီကလက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်. အဘယ်သူမျှမ Notarization လိုအပ်ပါသည်.
1) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှု APPLICATION သို့
1. အမည်, လျှောက်ထားသူ၏လိပ်စာနှင့်နိုင်ငံသား(s ကို)
2အမည်, တီထွင်သူ၏လိပ်စာနှင့်နိုင်ငံသား(s ကို)
(တစ်ဦး။) specification, (ခ။) တောင်းဆိုချက်များ, (က c ။) ြဒပ်မဲ့သော, (ဃ။) drawings (ရှိလျှင်)
4. Priority claim details (ဦးစားပေးသည့်ရက်စွဲ, တိုင်းပြည်နှင့်လျှောက်လွှာအရေအတွက်က)
5. Certified copy of priority document (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗျူရိုမှာတင်သွင်းလျှင်မ)
6. Details of all substantive invention (ရှိလျှင်), လျှောက်လွှာအရေအတွက်ကများအပါအဝင်, ပုံစံတင်ပို့ရန်၏နေ့စွဲနှင့်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကလက်ရှိအနေအထားကို.
2) နိုင်ဂျီးရီးယားမှာရာခိုင်နှုန်း NATIONAL Phase APPLICATION သို့
2. အမည်, တီထွင်သူ၏လိပ်စာနှင့်နိုင်ငံသား(s ကို)
3. အပြီးအစီး Specification
(တစ်ဦး။) specification, (ခ။) တောင်းဆိုချက်များ, (က c ။) ြဒပ်မဲ့သော, (ဃ။) drawings, (ရှိလျှင်)
4. PCT Application Details (အရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာအရေအတွက်များပါဝင်သည်ရကြလိမ့်မည် & နေ့စှဲ)
5. Details of Priority application (သက်ဆိုင်လျှင်), (ဦးစားပေးနေ့စွဲပါဝင်သည်ရကြလိမ့်မည်, ဖိုင်၏တိုင်းပြည်နှင့်ရာခိုင်နှုန်းလျှောက်လွှာအရေအတွက်က)
6. Details of all same or substantially same invention, လျှောက်လွှာအရေအတွက်ကများအပါအဝင်,
8. Other Documents (သက်ဆိုင်လျှင်)
တစ်ဦး. WIPO မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ခဲ့သောစဉ်အတွင်းသတ်မှတ်ချက် / တောင်းဆိုမှုများစေပြင်ဆင်မှု၏အထူးသဖြင့် (အတည်ပြုပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်)
ခ. WIPO မှာနိုင်ငံတကာပုံစံတင်ပို့ရန်၏အချိန်မှာလုပ်ပြင်ဆင်ချက်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများ (Form ကိုရာခိုင်နှုန်း / ခလရ / 306)
အဆိုပါရာခိုင်နှုန်း application ကိုအင်္ဂလိပ်ထက်အခြားတစ်ဦးဘာသာစကားမှာသည်ဆိုပါက, အဆိုပါရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်လိုအပ်ပါသည်. တစ်ဦးပရီမီယံဘာသာပြန်ချက်အခကြေးငွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်, ကအစောဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကလျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများ forward ပြုလုပ်ပေးဖို့အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်, ဖြစ်နိုင်ရင်2ကြိုတင်ဖိုင်ကိုယနေ့အထိရက်သတ္တပတ်.
Lex Artifex LLP is your progressive partner! နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-အာရုံစူးစိုက် IP ကိုအကြံဉာဏ်နှင့်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှုများအတွက်, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး +234.803.979.5959, သို့မဟုတ်အီးမေးလ် lexartifexllp@lexartifexllp.com.